Cofdm Transmitter, Uav Video Link, Mpitaovana Horonantsary ivelany - Kimpok
Transposter Wireless Analog
COFDM Mpandefa hafatra
Transfera Wireless COFDM
Mpanome Video Wireless
Kimpok Technology dia manana ekipa teknika matanjaka ary fetran'ny R&D. dia nanolo-tena izahay amin'ny fampandrosoana ny rafitra fanaraha-maso finday finday avo lenta ho an'ny fampiharana ny fampiharana ny lalàna sy ny miaramila, ny herinaratra, ny radara, ny helikoptera R / C, ny fiarovana sy ny fiarovana, ny departemanta governemanta, ny miaramila, ny rafitra fiarovana, ny sehatry ny solika, Vessel, ny vanja lehibe, orinasa sy ny sisa.
DC 12V Mpampita Horonantsary lava lava ary mahazo ...
Serivisy fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny COFDM Wireless Vide ...
100KM LOS FPV / UAV Wireless Image Transmitter 1….
Kimpok Technology dia lehiben'ny orinasa manerantany amin'ny teknolojia avo lenta amin'ny famolavolana sy ny famokarana. Niorina tamin'ny 1998 ary hita tao Shenzhen China. Manokana amin'ny fanomezana ny rafi-pifandraisan'ny onjam-pifandraisan'ny onjam-peo tsy fantatra amin'ny alàlan'ny fampitana, UAV, ny fandaharam-bahoaka sy ny indostrian'ny fiarovana. Amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola tsy tapaka amin'ny fanavaozana ary ny fampifangaroana ireo vokatra sy serivisy miavaka, i Kimpok dia manome vahaolana tsara kokoa izay ahafahan'ny mpanjifantsika hanao ny asany amin'ny fomba mahomby kokoa.
Ny baiko vonjy maika sy vahaolana amin'ny rafitra vonjy maika
Shina dia firenena iray tsy dia misy ala loatra amin'ny ala. Ny taham-bolan'ny ala sy ny fananana per capita dia ambany lavitra noho ny salan'isa iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany dia faritra avo afo ihany koa i Sina. Hatramin'ny nananganana ny firenena, 12 000 isan-taona ny doro ala. Maherin'ny 700, ...
Avy amin'ny serasera fampitandremana mialoha ny drafitra fampitandremana mialoha ka hatramin'ny fametrahana ny rafitra fanohanana ny serasera
Dimy ora taorian'ny horohoron-tany Wenchuan tany Chine tamin'io taona io, dia naharandona ny tamba-jotra, ary nahatratra 75% tao anatin'ny iray ora ny tahan'ny fifandraisan-telefaona tao anatin'ny herin'ny horohoron-tany tany Lushan. Inona ny antony? Voalaza fa io ny antontan-tarika nasionaly navoakan’ny minisiteran’ny minisitra ...
Address:Rm1310, Shangyou Residence, Gongye Rd., Distrika Longhua, Shenzhen, 518000 Shina